6 प्रभावी सकारात्मक सोच तकनीकहरू काम गर्छन्! - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | सेप्टेम्बर 17, 2019 | आत्म-सुधार, सकारात्मक सोच |0|
1 १. उत्तम सकारात्मक सोच प्रविधिको - रिफ्रेमिंग
2 २. कृतज्ञता
3 Sm. मुस्कुराउँदै
4 Sing. गाउनुहोस्
5 Positive. प्रभावकारी सकारात्मक सोच प्रविधिको - व्यायाम
6 6। ध्यान
चाहे तपाईं आफ्नो हालको समस्याहरूको उत्तर खोज्दै हुनुहुन्छ, वा सकारात्मकताको शक्तिमा विश्वास गर्ने, त्यसपछि यी प्रयास गर्नुहोस् सकारात्मक सोच प्रविधिको त्यो वास्तवमै काम गर्छ।
तपाईको वरपरको संसारले तपाईलाई तान्नका लागि सजिलो छ। दैनिक जीवनको ग्राइन्ड, सम्बन्ध समस्याहरू, वित्तीय कठिनाइहरू र cetera सबै समयमा तपाईंलाई अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ।
यद्यपि त्यहाँ केहि वास्तविक व्यावहारिक, सरल र सीधा अगाडि सकारात्मक सोच प्रविधिको छ कि जब तपाईंलाई लिफ्ट चाहिन्छ समयमा तपाईंलाई बृद्धि दिन सक्छ।
ठीक छ, हामी वास्तविक गरौं। तपाईं तलका तकनीकहरूमा भर पर्नुहुन्न किनभने किन अन्तर्निहित रहेको सबै कारणहरू समाधान गर्न तपाईंलाई निराश छ। तर ती मद्दत गर्न सक्छन् तपाइँ सफल हुन आवश्यक सकारात्मक मनोवृत्ति कसरी विकास गर्ने भनेर फेला पार्नुहोस् र विश्वलाई अझ बढी सकारात्मक स्थान बनाउँनुहोस्।
यसले बारीमा तपाइँको सोच्ने तरिका बदल्न प्रोत्साहन गर्दछ। चाँडै नै तपाईले आफ्नो अवस्थालाई अझ सकारात्मक प्रकाशमा हेर्न थाल्नु भएपछि यसले अझ बढी सकारात्मक चीजहरू, परिस्थिति, व्यक्ति र ठाउँहरूमा प्रवेश गर्ने ढोका खोल्छ।
तपाइँलाई कुनामा घुमाउन मद्दत गर्नको लागि तपाइँलाई भर्खर सुरुको ट्रिगर चाहिन्छ। यी साधारण सकारात्मक सोच प्रविधीहरूले तपाइँलाई त्यो गर्न मद्दत गर्न सक्छ!
1. राम्रो सकारात्मक सोच प्रविधिको - रिफ्रेमिंग
रिफ्रेमिंग घटनाहरू, विचारहरू, अवधारणाहरू र भावनाहरू अधिक सकारात्मक विकल्पहरू फेला पार्न अवलोकन र अनुभव गर्ने एक तरिका हो। यो रणनीति हो जुन प्राय: प्रशिक्षकहरू र थेरापिष्टहरू द्वारा गर्न प्रयोग गरिन्छ मानिसहरूलाई परिस्थितिलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न मद्दत गर्नुहोस्.
यहाँ यसले कसरी काम गर्न सक्छ भन्नेको उदाहरण छ। केवल आफ्नो जीवनबाट एक कदम पछाडि लिनुहोस् र प्रयास गर्नुहोस् र यसलाई केही टुक्राबाट हेर्नुहोस्। के तपाईको जीवन वास्तवमै खराब छ?
के तपाइँ प्रत्येक दिन खाना पाउन संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? के संसार अन्त हुँदैछ यदि तपाईंको अवस्था सुध्रिएन भने?
होईन, होईन, जीवनमा केवल स्थायी परिवर्तन हो। त्यसैले जब तपाईं यो क्षणमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ (जुनसुकै कारणको लागि), चीजहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नुहोस्।
यदि तपाइँसँग तपाइँको स्मार्टफोन वा अनलाइनमा यस वेबसाइटलाई पढ्ने माध्यमहरू छन् भने, तब तपाइँ पहिले नै धेरै भाग्यशाली हुनुहुनेछ जब तपाइँ निम्न कुराहरूलाई विचार गर्नुहुन्छ:
"करीव एक अरब व्यक्तिको 21st शताब्दीमा प्रवेश भयो पुस्तक पढ्न वा तिनीहरूका नामहरूमा हस्ताक्षर गर्न असमर्थ। "
"कम्तिमा 80% मानवता एक दिन $ 10 भन्दा कममा बस्दछ। "
"एक्सएनयूएमएक्स मिलियन मानिससँग आधारभूत पिउने पानी सेवाको पनि अभाव छ, साथै एक्सएनयूएमएक्स मिलियन मानिसहरू जो सतहको पानीमा निर्भर छन्।"
जब तपाईं आफ्नो जीवन र समस्याहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूको बारेमा केही राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। रिफ्रेमिंग एक उत्तम तरिका हो कुनै पनि समय मा एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकास!
कति पटक तपाईंले बसिरहनुभयो र सोच्नुभयो, हो, म नजिकको परिवार र साथीहरू पाएकोमा भाग्यशाली छु, एक जागिरमा जान, उन्नत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, शिक्षा र यस्तै अरू।
तपाईंको जीवनमा कृतज्ञ हुन धेरै चीजहरू छन्। त्यसैले उनीहरूको लागि कृतज्ञ हुन। तपाईसँग पहिले नै भएको सबै चीजका लागि कृतज्ञता र धन्यबादको भावनाको अभ्यस्त हुनुहोस्!
एक पटक तपाईले धन्यवादी महसुस गर्नुभयो र आफुसँग पहिले नै महसुस गर्नुभएपछि, यसले तपाईंलाई अगाडि बढ्न र तपाईंले सामना गरिरहेको कुनै पनि चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूमाथि विजय हासिल गर्न अर्को एउटा खुट्टा दिन्छ।
हो बस मुस्कुराउँदा तपाई खुशी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया मानिसहरूले सोच्दछन् कि हामी खुशी हुनुको परिणाम स्वरूप हाँसेर तपाईं वास्तवमै उल्टो गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको अनुहारमा मुस्कान राख्नुहोस् र यसले तपाईंलाई खुशी महसुस गराउनेछ। तपाईलाई छक्क पर्नु पर्दैन जुन वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेका छन कि पछिल्लो प्रकारको राम्रो महसुस गर्ने तरिका वास्तवमा काम गर्दछ, अधिक जानकारीको लागि यस स्रोतको प्रयास गर्नुहोस्।
यस सकारात्मक सोच प्रविधिको समर्थन गर्न कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धान वा स्मार्ट उद्धरण हुन सक्दैन। यद्यपि केवल यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ निलो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, केवल तपाइँको मनपर्ने खुसी गीतहरू सम्झनुहोस् र ठूलो स्वरमा गाउनुहोस्। अगाडि बढ्नुहोस् र प्रयास गर्नुहोस्।
तपाईको मनपर्ने गीतहरू गाउनु र भावनाको उही अवस्थामा रहन यो असम्भव छ, यो लगभग अनिवार्य रूपमा तपाइँको मुड उठाउनेछ। CD, DVD वा जे पनि संग गाउनुहोस्; तर यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई एक प्रयास दिनुहोस् किनकि यो धेरै प्रभावी छ।
5. प्रभावकारी सकारात्मक सोच प्रविधिको - व्यायाम
निस्सन्देह व्यायाम एक सकारात्मक सोच प्रविधिको हो जुन विरलै विफल हुन्छ!
जिम जान र बाहिर काम गर्दै। लामो फुर्सतको हिड्दै। आधा घन्टा को लागि पौंडी एक बक्सअसाईस वा स्पिनि class वर्ग पूरा गर्दै। गल्फ, जग्गिंग वा साइकलिंगको एक गोल। सूची मा जान्छ।
यी सबै चीजहरूले तपाईंलाई तपाईंको ऊर्जाको लागि उत्कृष्ट आउटलेट दिन्छ। व्यायामले एन्डोर्फिन र न्युरोट्रान्समिटरको रिलीज गर्न उत्तेजित गर्दछ जसले तपाईंलाई प्राकृतिक उच्च भावना दिन्छ।
न केवल व्यायाम दिमाग को एक सकारात्मक फ्रेम मा तपाइँ राख्नु, त्यहाँ धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धित बेनिफिटहरू छन् जुन तपाईंले साँच्चिकै यो विकल्पलाई अँगाल्नु पर्छ।
व्यायामले तपाईंको मुडलाई सुधार गर्न, तपाईंको आत्मविश्वास बढाउन, तपाईंको सामाजिक अन्तरक्रिया बढाउन, तपाईंको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ। यो एक महान सामना गर्ने संयन्त्र हो आत्म-छवि सुधार गर्दछ र तपाईंलाई मद्दत गर्दछ राम्रो सुत्न.
ध्यान वास्तवमै एक उत्तम सकारात्मक सोच प्रविधिको हो। केही छोटो मिनेट को अन्तरिक्ष भित्र तपाईं एक भ्रमित हुनु, मिसिएको, उत्तेजित, तनावग्रस्त र सामान्यतया प्रकाश स्वतन्त्रता को एक, विचार, सद्भाव र शान्तिपूर्णताको एक तल बाट आफ्नो विचार ढाँचा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सबै केहि मिनेट मौन ध्यान को अन्तरिक्ष भित्र गर्न सकिन्छ। केवल शान्त ठाउँ खोज्नुहोस्, एउटा सिट लिनुहोस् र आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस्। गहिरो सासहरू चित्र बनाउन सुरू गर्नुहोस् र विचारहरूको दिमाग खाली गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
तपाइँ केवल एक वा दुई मुख्य शब्दहरूमा केन्द्रित गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। श्वास शब्दमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईं सास लिनुहुन्छ, र श्वास बाहिर जानुहुँदा 'आराम गर्नुहोस्'। केवल यी शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस् र यसले सबै कुरा बाहिर ब्लक गर्दछ।
अर्को विधि भनेको उही चीजलाई प्रयास गर्नु हो तर यदि अन्य विचारहरूले तपाईंको दिमागमा प्रवेश गरेमा, विचारलाई मान्यता दिनुहोस्, लेबल गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई जान दिनुहोस्।
उदाहरण को लागी, यदि एक विचार कार्य को म्याद को बारे मा तपाईको टाउको मा प्रवेश गर्छ भने, बस मानसिक रुपमा मलाई भन्नुहोस्, "यो काम को म्याद को बारे मा एक विचार हो"। विचार स्वीकार्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई बग्न छोड्नुहोस्।
यससँग सम्बन्धित अन्य विचारहरू पनि हुन सक्दछन्। तपाईं केवल प्रविष्ट गर्न सक्नुहुने सबै विचारहरूको साथ समान गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्ततः विचार संख्या मा कम हुनेछ। तपाईंको दिमाग शान्त र बसोबास गर्न थाल्नेछ, तपाईं सास फेर्न ध्यान केन्द्रित गर्न र अधिक स्पष्ट दिमाग छोड्ने अनुमति दिनुहुन्छ।
यो चलिरहेको बानीको रूपमा प्रयोग गर्न यो शक्तिशाली उपकरण हो, त्यसैले यसलाई प्रयास गर्नुहोस्!
पछिल्लोसकारात्मक सोचको साथ तपाईंको स्वास्थ्य कसरी सुधार गर्ने
अर्कोके आकर्षणको कानूनले काम गर्दछ?3सरल तर्क